Manasongadina ny Olana Fototry ny Tsy Fahalalàna Tantara Ny Fitafian’Ilay Tarika Mahalefaka Japoney Mitovy Amin’ny Fanamian’ny Nazi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2016 11:48 GMT
Keyakizaka46 dia tarika zazavavy mahalefaka nosainina, natsangana ary narahin'ilay mpamokatra hira Japoney nanana ny lazany Akimoto Yasushi. Maro sady maro karazana ireo tarika malaza mahalefaka natsangan'i Akimoto, 58 taona, ary anisan'izany ny AK48. Ny fanaovan-kiran'i AK48 sy Keyakizaka46 dia vokarina kokoa ho tambajotran-tarika mpihira, ahitana ireo zana-bondrona kely any amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena, ho fanomezana fahafaham-po ireo mpankasitraka eny ifotony.
Natsangana sy narafitr'i Akimoto Yasushi, manana zana-tarika sy tambajotran-tarika mpihira ny KB48, ary ao anatin'izany ny Keyakizaka46. Dikasary avy amin'ny Wikipedia.
Ny tanjon'ny tarika olo-mahalefaka dia ny hiteraka fidiram-bola ho an'ireo orinasa mpandrakitra sy mpamoaka hira betsaka araka izay tratra, ary ireo zazavavy mandrafitra ny tarika sy ireo zana-tarika rehetra any amin'ny faritra ireo dia singa iray monja amin'ny milin'ny haivarotra. Raisina hiasa tanora ireo zazavavy ireo (maro amin'izy ireo no tsy nahafeno akory ny fianarana eny amin'ny lisea nialoha ny hiasana amin'ny sehatry ny fampialana voly), ary ny asany voalohany dia ny hahafatifaty (fa tsy ny harani-tsaina) rehefa eny ambony sehatra.
Ny ampitso marainan'ny fampisehoana rindran-kira, dia nanamarika ny ZIP TV, fandaharana televiziona iray mivoaka isan'andro ao amin'ny sampan'ny Yomiuri amin'ny Nippon TV, fa mitovy amin'ny “mpamosavy” ry zareo nitafy ny fanamiana miaramila nanaovan-dry zareo nandritra ny fampisehoana tao Yokohama:
Na izany aza, voamariky ny maro amin'ireo japoney mpisera ny media sosialy haingana ny fanamiana misy itovizana betsaka dia betsaka amin'ny fanamian'ny Nazi tamin'ny ady lehibe faharoa. Nalaza eo noho eo amin'ny Twitter ny voambolana “fanamiana Nazi”.
Avy eo ny tantara nalain'ny fampitam-baovao miteny anglisy ivelan'i Japan hotantaraina, amin'ny ankapobeny hatao ho ohatra amin'i “Japan hafahafa”.
Ny Foibe Simon Wiesenthal Center, amin'ny maha-fikambanana iraisampirenena mandala ny zon'olombelona azy dia manoka-toerana ny fikolokoloana ny tsiaron'ny Fandevonana [Holocaust], dia efa ela nanandra-teny hanoherana ny Antisemitisma manerana izao tontolo izao. Ao amin'ny fanambarana momba ny fanamian'ny tarika, taorian'ny niantsoana mivantana an'i Akimoto mpamokatra hanao fialantsiny, dia naneho ny “rikorikony” ny foibe, tamin'ny nanatsongàny ny tenin'i Rabbi Abraham Cooper manao hoe :
Fifanandrifian-javatra ve fa efa niomana ny handeha ho any Japan indrindra ny Rabbi Cooper hanao fampirantiana momba an'i Anne Frank sy i Sugihara Chiune (diplaomaty Japoney nandritra ny fotoan'ady nahazo ny voninahitry ny Olo-marina avy amin'ny Firenenkafa) niara-nomanin'ny Foibe Wiesenthal sy ny Oniversite Soka ao Japan izao fahatezerana tamin'ny fanamian'ny tarika izao.
Vao 12 ora monja taorian'ny namoahan'ny Foibe Simon Wiesenthal ny siokany, dia samy efa nanao fialantsiny ampahibemaso avokoa na ny Sony Music na i Akimoto Yasushi.
Betsaka tamin'ireo fampitam-baovao no nitatitra ny mea culpa. Niantsafa tamin'i Akimoto sy ny orinasa iray mpiara-miasa aminy, Voa sy Voninkazo ny NHK, fampitam-baovaom-pirenena an-tsary sy feo, momba ny fifandiran-kevitra manoloana ny fanamiana.
Ny nijoro tao amin'ny antsafa NHK nifanaovana tamin'i Akimoto sy ny Voa sy Voninkazo dia ny lohateny lehibe sy matevina tamin'ireo fialantsiny: “Miala tsiny indrindra aho” (大変申し訳なく思う) avy amin'i Akimoto sy ny “Maneho ny fialantsiny avy amin'ny fonay tokoa izahay” (心よりおわび) avy amin'i Sony.
Tsy ampy ny fialantsiny ho an'ny rehetra. Nokianin'ny Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.) [Firaisankina Hanoherana ny Hetsika Mpanavakava-bolonkoditra] ao Japan ireo fialantsiny:
Tsy afa-po ihany koa ny gazety mpanaitaitra Nikkan Gendai. Tao amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny 3 novambra tsy fantatra izay tena nanoratra azy, nanamarika ny mahazavadehibe ny fahatakarana na ara-tantara na amin'ny zavamisy ankehitriny amin'ny fampiasana fanamiana Nazi:
Nanamarika ny mpisera Twitter @lautrea fa efa ela ihany no nisian'ny ezaka hampidirana tsikelikely ny fakana sary an-tsaina Nazi tao amin'ny marika Keyakizaka. Efa hita nanao fanamiana mitovitovy amin'izao ny mpikambana ao amin'ny tarika mahalefaka olona ity tany aloha tany—fanamiana novolavolain'i Onai Kimika mpanjaitra ny akanjon'ny AK48—tamin'ny fandaharana nandeha tamin'ny fotoana be mpanaraka izay niresaka ny tantaran'ny Nazisma:
Nanasongadina ihany koa ny mpisera Twitter iray hafa fa tsy vao sambany no nisy tarika zazavavy mahalefaka voasaringotra amin'ny resaka Nazisma tahaka izao. Tamin'ny taona 2008, mpiara-miasa amin'ny Hello Project, tarika iray notarihan'i Tsunku, lehilahy mpanatontosa malaza, no niantso an'i Adolf Hitler ho “lehilahy mahafinaritra” (偉人) raha nivoaka tamin'ny fantsona TV Tokyo. Niteraka fialantsiny sy filazana ho “tsy fahalalana ny tantara” ihany koa izany toe-javatra izany: